IHE Ị GA-EME MA Ọ BỤRỤ NA EKWENTỊ AHỤ ABANYE N'IME MMIRI - EKWENTỊ - 2019
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ekwentị ahụ abanye n'ime mmiri
Windows sistemụ arụmọrụ, dịka software dị mgbagwoju anya, dị n'okpuru ụdị ọdịda niile. Nsogbu ụfọdụ na-aghọ ezigbo nsogbu nye ndị ọrụ na-enweghị uche. Anyị ga-etinye ihe a iji kpochapụ njehie koodu 0x80004005.
Nchọpụta nsogbu 0x80004005
Ọtụtụ mgbe, ọdịda a na-eme mgbe ị na-emelite Windows, mana ụfọdụ ndị ọrụ na-ezute ya mgbe ha na-agbalị ịmepụta ihe oyiyi nke ụgbọala nyocha, ịgbanwe faịlụ faịlụ, ma ọ bụ pụọ na netwọk ụwa site na netwọk mpaghara. Ọzọ, anyị na-enyocha isi ihe kpatara njehie ma wepụ ha.
Ebumnuche 1: Antivirus Software
Mgbochi nke ndị ọzọ na-emepe ndị ọzọ nwere ike ime ka ha dịrị na usoro ahụ dịka ezigbo ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike igbochi faịlụ faịlụ dị ka enyo. Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịhapụ ihe omume ahụ ma ọ bụ reinstalling nwa oge. N'eziokwu, e nwere otu pitfall ebe a: ọ bụrụ na n'oge echichi na-enwekarị nsogbu, mgbe ahụ iwepụ nwere ike sie ike. Na isiokwu dị na njikọ dị n'okpuru, ị nwere ike (mkpa) gụọ otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi.
Gụkwuo: Wepụ antivirus site na komputa
Ebumnuche 2: Ntọala Firewall Settings
Emere Firewall Windows iji kpuchie PC anyị site na netwọk dị iche iche na netwọk, mana ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile. Enwere nhọrọ abụọ: Malitegharịa ma hazie ọrụ kwekọrọ na ya ma gbanyụọ iwu maka njikọ abata. Biko rịba ama na omume ndị a nwere ike ịzọpụta anyị naanị nsogbu nwa oge. Ọ bụrụ na mgbe oge na-aga, njehie ahụ gosipụtara, mgbe ahụ, ọ dị mwute ikwu na ị ga-ebunye Windows. Ị nwere ike, n'ezie, gbanyụọ ọkụwall kpamkpam, mana nke a ga-ebelata nchebe nke usoro ahụ.
Ịdọ aka ná ntị ọzọ: ọ bụrụ na ị na-eji usoro antivirus, mgbe ahụ, nhọrọ ịhazi ọrụ ahụ adịghị gị mma, ebe nke a nwere ike ime ka esemokwu ngwa, na-eduga ná nsogbu dị iche iche. Ebe ọ bụ na ọrụ ahụ kwụsịrị, iwu enweghị ike ịda mbà, wee gaa usoro ndị a.
Mepee eriri Gbaa ọsọ igodo Nweta + R na n'ọhịa "Meghee" anyị na-abanye otu
Anyị na-achọ ọrụ na ndepụta "Firewall Windows" ma lee ụdị mwepụta. Ọ bụrụ na ọ dị iche na "Akpaaka", achọrọ ịhazi.
Pịa ugboro abụọ na ọrụ ahụ na ndepụta ndepụta dapụtara na-ahọrọ uru kwesịrị ekwesị, wee pịa "Tinye" ma mechie windo Njirimara.
Ọzọ, ịkwesịrị ịmalitegharịa ọrụ ahụ. A ghaghị ime nke a ma ọ bụrụ na emeghị ihe nhazi ụdị ihe a. A na-eme nke a site na ịpị njikọ nke egosiri na foto dị n'okpuru.
Anyị na-aga "Ogwe njikwa" ma mepee oghere ntọala firewall.
Pịa na njikọ "Nhọrọ Di elu".
Gbanwee taabụ na ntọala nke njikọ na-abata, họrọ iwu mbụ, wee pịgharịa gaa na listi, jide ala SHIFT ma pịa na nke ikpeazụ. Anyị ahọrọla ọnọdụ niile na arụmọrụ a, mgbe ahụ, anyị pịa bọtịnụ ahụ "Gbanyụọ ọchịchị".
Mechie window windo ma megharia igwe.
Ebumnuche nke 3: Ọrụ njikwa akaụntụ njikwa
Na "Njikwa Akaụntụ" (UAC) ọnọdụ ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka ya na firewall - ọrụ na-ezighị ezi na ụfọdụ. N'eziokwu, ihe nile dị mfe: ọ bụ iji belata ọkwa nke nchedo nke kachasị.
Mepee menu "Malite" wee pịa foto ndetu.
Gaa na ntọala nke UAC.
Debe ihe mmịfe ahụ na ala, na uru "Kpacharala Anya" ma na-atụgharị Ok.
Mechie windo ntọala ma malitegharịa.
Ebumnuche nke 4: Enweghị ikike nchịkwa
A chọrọ ikike nchịkwa iji rụọ ọrụ dị mkpa na sistemụ arụmọrụ. Ọ bụrụ na enyereghị ha aka na aza ajụjụ gị, mgbe ahụ, njehie dị iche iche nwere ike ịda, tinyere ndị a tụlere taa. Enwere ụzọ atọ: gbanwee na akaụntụ "Onye nchịkwa," ma ọ bụrụ na ọ bụla, mepụta onye ọrụ ọhụrụ yana ikikere kwesịrị ekwesị ma gbanwee ụdị ndekọ ahụ nke ị na-arụ ọrụ ugbu a.
Anyị agaghị akọwa n'ụzọ zuru ezu ngbanwe n'etiti ndị ọrụ na Windows, ebe ọ bụ na usoro a dị nnọọ mfe: dị nnọọ na menu Malite, wee banye ọzọ, mana n'okpuru akaụntụ dị iche. I nwekwara ike ime nke a n'emechighi mmemme.
Gụkwuo: Otu esi agbanwe akaụntụ njirimara na Windows 7
Usoro nke ịmepụta akaụntụ ọhụrụ adịghịkwa mgbagwoju anya. Enwere ike ime nke a dika nke "Ogwe njikwa", na site na mmalite menu.
Gụkwuo: Otu esi emepụta onye ọrụ ọhụrụ na Windows 7
Ịgbanwe ụdị "ịza ajụjụ" dị ka ndị a:
Anyị na-aga n'ihu ịmepụta akụkọ, dị ka nkọwa nke ihe mere 3, ma pịa njikọ nke egosiri na nseta ihuenyo.
Tinye ngbanwe ahụ "Nchịkwa" ma pịa bọtịnụ ahụ na aha kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike ịbanye paswọọdụ admin, ma ọ bụrụ na e deberela ya.
Ebumnuche 5: Melite Nsogbu
Ọzọ, anyị ga-atụle ọdịda mgbe ị na-emelite os. Ụfọdụ nchịkọta arụnyere nwere ike igbochi nrụnye nke ndị ọhụrụ. N'ọnọdụ anyị ọ bụ KB2592687 ma KB2574819. A ghaghị iwepu ha na usoro.
More: Otu esi wepu mmelite na Windows 7
Nsogbu na-etinye SP1
Njehie a nwekwara ike ime mgbe ị kwalite site na Windows 7 na SP1. A na-edozi nsogbu ahụ site na ịgbanwere igodo ndekọ ahụ nke na-ahụ maka ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị ọkwọ ụgbọala netwọk ndị ọzọ jikọtara.
Mepee ndekọ editọ site na iji menu Gbaa ọsọ (Nweta + R) otu
Gaa alaka ụlọ ọrụ ahụ
Na nchịkọta ziri ezi, pịa RMB na oke
Họrọ otu ihe "Gbanwee".
Debe uru 14 (ọ kachasị) wee pịa Ok.
Ọ bụrụ na enweghị ike idozi ọnọdụ ahụ, a ga - eme ihe ndị a:
Gaa "Ogwe Njikwa Nlekọta" nke "Ogwe njikwa".
Pịa na njikọ "Ntọala ngbanwe mgbanwe".
Ọzọ, gaa na njirimara nke njikọ ọ bụla (PKM - Njirimara).
Gbanwee na taabụ "Network" ma gbanyụọ ihe niile nke atọ. Ndị a na-agụnye ọnọdụ niile na-enweghị okwu "Microsoft" na utu aha ma ọ bụghị usoro TCP / IP. Enweghịkwa mkpa iji wepu QoS Packet Scheduler na ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọkọlọtọ ndị aha ha sụgharịrị n'asụsụ Russian (ma ọ bụ asụsụ gị). A na-ahụ ihe atụ nke ihe ndị ọzọ dị na nseta ihuenyo. A na-eme mkpọtụ site n'ịchọpụta igbe kwesịrị ekwesị na ịpị bọtịnụ. Ok.
Ọ bụrụ na ịnweghị ịwụnye components netwọk ma ọ bụ enweghị ike ịchọpụta nke ọma ndị bụ ndị nke atọ, ọ bụrụ na nsogbu ahụ edozighị, naanị otu ụzọ ị ga-esi wụgharịa Windows ma mezie usoro ahụ dị "dị ọcha."
Taa, anyị enyochawo ihe kpatara ya nke njehie 0x80004005 na Windows 7. Dịka ị nwere ike ịhụ, enwere ọtụtụ n'ime ha na maka onye nke ọ bụla, a ghaghị itinye usoro ụfọdụ kpọmkwem. N'ọnọdụ ahụ, ọ bụrụ na amaghị kpọmkwem ihe kpatara ọdịda ahụ, ị ​​ga-anwale usoro niile, na-agbaso usoro nke enyere ha na isiokwu ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ekwentị 2019